Noocyada sheekooyinka: imisa nooc ayaa jira iyo maxay yihiin | Suugaanta Hadda
Ka fikirka sheekooyinka ayaa had iyo jeer la xiriira dhagaystayaasha ilmaha. Si kastaba ha ahaatee, tani khasab ma aha inay noqoto maadaama ay badan yihiin noocyada sheekooyinka. Qaarkood waxay diiradda saarayaan dhagaystayaasha qaangaarka ah, halka kuwa kale, oo leh mowduucyo carruureed oo badan, ay noqon doonaan carruurta.
Laakiin sheekooyin noocee ah ayaa jira? Mid walba muxuu ku saabsan yahay? Haddii xiisahaagu uu ku gilgilay, markaa waan ka hadli doonnaa.
1 Waa maxay sheeko
2 Waa maxay noocyada sheekooyinka jira?
2.1 Sheekooyinka Fairy
2.2 Sheekooyinka xoolaha
2.3 Sheekooyinka caadooyinka
2.5 Macquul ah
2.12 Sheekooyinka Sayniska
3 Maxaa ka dhiga sheeko inay ku dhacdo hal qayb ama mid kale
Waa maxay sheeko
Sheekada waxaa lagu qeexaa sheeko gaaban, taas oo ku salaysnaan karta dhacdooyin dhab ah iyo in kale, oo astaamaheeda la yareeyo. Doodda sheekooyinkani waa mid aad u fudud waxaana lagu sheegi karaa hab hadal ama qoraal ah. Dhexdeeda, dhinacyada khayaalku waxay isku qasan yihiin dhacdooyin dhab ah, waxaana loo isticmaalaa in lagu sheego sheeko laakiin sidoo kale lagu caawiyo carruurta inay bartaan qiyamka, akhlaaqda, iwm.
La qaab -dhismeedka sheekadu wuxuu ku salaysan yahay saddex qaybood si fiican loogu qeexay dhammaantood:
Hordhac, halkaas oo jilayaasha lagu soo bandhigo loona soo bandhigo dhibaato ay qabaan.
Guntin, halkaas oo jilayaashu ay ku dhex milmeen dhibaatada maxaa yeelay wax baa dhacay oo ka horjoogsanaya wax walba inay noqdaan kuwo qurux badan sida hordhaca.
Natiijo, taas oo dhacda marka xal loo helo dhibkaas si loo helo dhammaad farxad leh, oo noqon kara sidii bilowgii oo kale.
Waa maxay noocyada sheekooyinka jira?
Ma kuu sheegi karno in ay jirto kala soocid keliya oo ah noocyada sheekooyinka jira, mar haddii ay jiraan qoraayaal u kala soocaya tiro ka badan kuwa kale. Tusaale ahaan, marka loo eego muxaadarada "Laga soo bilaabo sheeko caan ah ilaa sheeko suugaaneed" oo uu qoray José María Merino, waxaa jira laba nooc oo sheekooyin ah:
Sheeko caan ah. Waa sheeko soo jireen ah oo sheekada jilayaasha qaar lagu soo bandhigo. Tani, iyaduna, waxay u qaybsan tahay sheekooyin, xayawaan, sheekooyin iyo sheekooyin caadooyin ah. Intaa waxaa dheer, in dhammaantood lagu daro waxay noqon doontaa khuraafaadka iyo halyeeyada, in kasta oo aan lagu darin qaybinta sheekada caanka ah.
Sheeko suugaaneed: waa shaqadaas oo lagu gudbiyo qoraal. Mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn ee la keydiyey waa El conde Lucanor, oo ka kooban 51 sheeko oo asalkoodu kala duwan yahay, oo uu qoray Don Juan Manuel. Waxay ku jirtaa qaybtaan weyn oo aan ka heli karno kala qaybsanaan weyn, maadaama sheekooyin dhab ah, qarsoodi, taariikh, jaceyl, boolis, khiyaali ...
Qorayaasha kale ma arkaan kala soociddan iyo tixgeli in hoosaadyadu dhab ahaantii yihiin noocyada sheekooyinka in jira. Sidaa darteed, kuwa ugu caansan waxay noqon doonaan:
Waxaa lagu qeexi doonaa sheekooyinka caanka ah, mid ka mid ah kuwa ugu akhriska badan laguna tilmaamo inay tahay sheeko aan dhab ahayn, oo dhacda waqti iyo meel aan la garanayn oo leh imtixaan ay tahay in laga gudbo si loo gaaro dhammaadka farxadda leh.
Iyaga dhexdooda jilayaasha maaha dad, laakiin xoolo leh shakhsiyad dadnimo. Mararka qaarkood xayawaanka waxaa la socon kara aadanaha, laakiin kuwani waxay u dhaqmi doonaan xagga dambe.
Waa sheekooyin aad doonayso in aad ku dhaliisho bulshada ama waqtiga sheekada la sheego, mararka qaarkood iyada oo loo marayo qosol ama maad.
Waxaa lagu dari doonaa sheekooyinka suugaanta, laakiin qaar badan ayaa rumaysan inay sidoo kale noqon karaan sheekooyin caan ah. Xaaladdan oo kale, sheekadu waxay ku salaysan tahay wax la alifay halkaas oo sixir, sixir iyo jilayaashu ay awood ka muuqdaan.
Waa kuwa maalinba maalinta ka dambeysa u sheega muuqaallada, kuwaas oo leh Carruurtu way is aqoonsan karaan, oo sidan bay wax ku baran karaan.
Waxay ku sifoobeen iyagoo raadinaya in akhristaha uu ku dheggan yahay sheekada si uu ugu noolaado si la mid ah hal -abuurka sheekada.
Si ka duwan tii hore, oo ah meesha khiyaanada laga raadsado, halkan waxaa ah cabsi lagu tilmaami doono dhagarta. Laakiin sidoo kale waxaa loogu talagalay in akhristaha uu la kulmo si la mid ah jilaaga, kaas oo baqaya kuna noolaa argagaxa sheekada lagu sheegay.
Hadafkaagu waa inaad soo bandhigto a sheeko qosol badan oo akhristaha ka qoslinaysa, ha ahaato kaftan, xaalado qosol leh, jilayaal qallafsan, iwm.
Maaha wax badan oo sharxaya xaqiiqo taariikhi ah, laakiin waxay adeegsadaan xaqiiqdaas dhabta ah si ay u helaan jilayaasha iyo waqtiga iyo meesha, laakiin uma baahna inay daacad u noqdaan xaqiiqda.
Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa sheeko ku saabsan Leonardo Da Vinci maalin maalmaha ka mid ah markii uu ka nasanayay rinjiyeynta. Waxaa la ogyahay in dabeecadda jirtey oo sheekadu ay ku taal waqtigaas bannaan, laakiin ma aha inay noqoto wax run ahaantii dhacay.
Sheekooyinkaas waxaa saldhig u ah sheeko ay dulucda ugu weyni tahay jacaylka u dhexeeya laba xaraf.
Iyaga dhexdooda dhagarta wuxuu ku salaysan yahay dembi, dembi ama caddaynta dhibaato iyada oo loo marayo jilayaasha kuwaas oo ah bilays ama dembi baadhe.
Waxay yihiin kuwa ku yaal mustaqbalka ama hadda laakiin leh horumar farsamo oo aad u horumarsan (oo aan weli ka jirin nolosha dhabta ah).
Maxaa ka dhiga sheeko inay ku dhacdo hal qayb ama mid kale
Ka soo qaad in aad sheeko u sheegeyso wiilkaaga ama gabadhaada, wiilka aad abtiga u tahay ama gabadha aad abtiga u tahay… Ama ka sheekayn mid aad hore u taqaan. Iyada oo ku saleysan kala soocidda kor ku xusan, tani waxay noqon kartaa sheeko dad haddii ay ka hadleyso qayb ka mid ah sheekooyinkaas.
Dhinaca kale, haddii waxa aad samaynayso aad akhrido buug sheekooyin ah, waxay ku dhici lahayd xayndaabka suugaanta, mar haddii qoraal lagu gudbin doono.
Runtii Marka la kala saarayo sheeko, siyaabo badan baa loo samayn karaa:
Haddii laga sheekeeyo ama la akhriyo (qoran).
Haddii ay tahay mid fantastik ah, sheekooyin, sheekooyin, saraakiil boolis, lamaane ...
Xataa qaar sheekooyinka waxaa loo qaybin karaa laba qaybood ama ka badan maaddaama markii liis -gareynteeda, loo samayn karo iyadoo loo eegayo jilayaasha ama sida ku cad qorshaha. Tusaale ahaan, u malayso in jilayaasha ay yihiin xayawaan leh astaamaha aadanaha (waxay ku hadlaan, sabab, iwm). Waxaan la kulmi lahayn sheeko xayawaan ah. Laakiin ka warran haddii jilayaashaasi ay ahaayeen dembi -baarayaal baadhaya dhac ka dhacay hawdka? Waxaan durba galaynaa sheekada carruurta ee booliska.
Muhiimad badan ha siin rabitaanka inaad kala soocdo buug. Kaliya daabacayaasha ayaa u kala saara oo sidaas u sameeya si ay “amar” ugu hayaan buuggaagta buuggooda, iyo sidoo kale inay ogaadaan buugaagta ay tahay inay daabacaan iyo kuwa aysan ahayn. Laakiin marka laga hadlayo ka fiirsashada akhristayaasha, waxay akhrin doonaan sheekooyinka ku saleysan dhadhankooda, iyagoo awood u leh inay isku daraan noocyada iyo, sidaas darteed, noqdaan kuwo asal ah oo la yaab leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Noocyada sheekooyinka
Leopoldo Panero. Sanad guuradii dhalashadiisii. Gabayada qaarkood